नेपाल देखि अमेरिकासम्म छाएका कराते रेफ्रि « KhelkudNews.com
नेपाल देखि अमेरिकासम्म छाएका कराते रेफ्रि
Published On : 14 November, 2018 10:37 am
कुनै पनि खेलको अन्तराष्ट्रिय एरेनामा उपश्थित हुनका लागि महत्वपूर्ण योग्यता भनेको भाषाको योग्यता नै हो । तर, घरेलु भुमिमा राष्ट्रिय रेफ्रि हुनका लागि घरेलु भाषाको ज्ञान नै पर्याप्त पनि हुन सक्छ । यसै कुरालाई मनन गर्दै नेपालमा नेपाली भाषामै पाठ्याक्रम तयार गर्दै रेफ्रि सेमिनार भएको थियो । दुइ दशक अघि यसैगरी नेपालमा करातेको राष्ट्रिय रेफ्रि सेमिनार भएको हो । यसको पाठ्यक्रम तयार पार्ने काममा पहिलो ब्याजमा प्रशिक्षार्थीकै रुपमा रहेका सरोज भट्टराइको भुमिका प्रमुख थियो ।
नेपाल मेरिट सिस्टममा नचल्ने देश हो । सरोजकी धर्मपत्नी इभा भट्टराइ, अत्यन्त जेहेन्दार थिइन् । लोकसेवा आयोग मार्फत औषधी ब्यबस्था विभागमा जागीर थियो,अधिकृत तहको । मेरिट सिस्टम भन्दा फरक ढंगले विभाग चल्दा आफू अन्यायमा परेको महशुष भयो, इभालाई । युएस ओपन कराते खेलिसकेका सरोजका लागि पनि अमेरिका आवात जावत त्यत्ति ठूलो कुरा थिएन । औषधी ब्यबस्था विभाग मेरिटिक्स भन्दा फरक ढंगले चलेको कुराले यो दम्पत्तीमा एक खाले झोक पलायो । लागे अमेरिका तीर । यो झोक चलाइ अनुसार हाल सरोज अमेरिकाका ए क्लास करातेका राष्ट्रिय रेफ्रि । इभाको हैसियत पनि अधीकृत भन्दा कम छैन । सामान्यतया जिवन यापन कठिनाइका कारण धेरै नेपाली विदेशीएका छन् । यो भन्दा फरक छ, भट्टराइ दम्पत्ती । इखालु स्वभावको यो दम्पत्तीका लागि नेपालमा जिवन यापन कठिन थिएन । तर, पनि केही नपुगे जस्तो भयो । सामान्य नेपाली झै बाच्ने सहजताका लागि होइन, केही गर्न अमेरिका पुगेका थिए । गरेर पनि देखाए ।
समाचारका पात्र बन्नका लागि सरोजका अन्य पनि चर्चा योग्य विषय धेरै हुन सक्छन् । यीनी धरानमा हुर्कीएका हुन् । हुर्कदा अली झगडालु स्वभाबका । साचो भन्नु पर्दा टोले दादा हुन पाउदा गर्व गर्ने । यसै क्रममा आफैले स्ट्रेट किक, पावर पन्च लगायत अभ्याष गर्न थाले । सुरुमा तेक्वान्दो सिके । दुइ बर्ष तेक्वान्दो सिकेका उनी , पछि नर बहादुर योञ्जनका बक्सीङ चेला बने । यो सबै सन् १९९० भन्दा अघिका कुरा थिए ।
काठमाडौ आएर करातेमा प्रबेश गरे । जनकपुरमा भएको पहिलो कराते च्याम्पियनसीपमा यीनी तेश्रो भएका थिए । सातो अधीराजयब्यापी किक बक्सीङमा पनि यीनी तेश्रो भए । दोश्रो दक्षिण एसियाली किक बक्सीङको दौरान घाइते भए । वाको किक बक्सीङमा पनि यीनी सहभागि भए । युएस ओपन करातेमा पन िसहभागिता जनाए । यीनको खेलाडी जिवन औषत नै हो । तर, रेफ्रिको रुपमा नेपाली करातेमा सरोज चर्चा गर्नै पर्ने पात्र हुन् ।
सन् १९९८ मा उनी काठमाडौ. जिल्ला ब्ल्याकबेल्ट कमिटीमा सचिव थिए । उनको मनमा एउटा सोच आयो । करातेमा नेपाली पाठ्यक्रमको विकास किन नगर्ने ? करातेका बरिष्ठ प्रशिक्षकहरुले उनको यो कुरालाई स्वीकार गरे । पाठ्यक्रम तयार गर्ने र ब्यबस्थापनको उनको भुमिका महत्वपूर्ण र्रह््रयो । ततलीन युवराज दिपेन्द्र विर विक्रम शाहदेवको जन्मोत्सबको अबसरमा प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । त्यसै समयमा नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय रेफ्रि सेमिनार पनि भएको थियो । उनी लगायत २० जना राष्ट्रिय रेफ्रि तयार भए ।
यस पछि नेपालमा आयोजित आठौ दक्षिण एसियाली खेलकुदको छनोटमा पहिलो चरण देखि अन्त्यसम्म सरोज संलग्न भए । यत्तिसम्म की एक दशक नेपाली करातेको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता हुदा एरेनामा सरोजको उपश्थिती अनीबार्य झै लाग्थ्यो । त्यस पछि दोश्रो राष्ट्रिय रेफ्रि सेमिनार भक्तपुरमा भएको थियो , जहाँ उनी प्रशिक्षक थिए ।
सन् २००२ मा हङकङमा भएको रेफ्रि कमिसनमा यीनले ओन्कासीससंग धेरै कुरा सिक्ने मौका पाए । सन् २००३ मा यीनी सहित पुरेन्द्र लाखे र दिलेन्द्र गोविन्द बैद्य तीन चिनिएका रेफ्रि विच छानीदै यीनी विश्व कराते कन्फरडेसनको रेफ्रि सेमिनारमा जान योग्य ठहरिए । यो उनको जिवनको एउटा महत्वपूर्ण फड्को थियो । चौथो बिश्व च्याम्पियनसीपमा यीनले रिक्वायरमेन्ट टेस्ट पुरा गरे पछि ७० भन्दा बढी बाउट खेलाउने अबसर पाए । त्यही बाट यीनी भए डब्लुकेसी रेफ्रि ।
सन् २००५ मा युएस ओपन खेल्न अमेकिा पुगेका उनी सन् २००७ देखि लगातार अमेरिकामा छन् । सन् २०१० सम्म उनले श्रीमतीकै लागि खर्चीए । इभाले नेपालमा जुन जागीर राजीनामा दिएकी थिइन्, त्यसै तहको जिम्मेवारी अमेरिकामा पाउनु पर्छ भन्ने थियो । यसका लागि दुवैले समनेत गरे । इभा त्यसै अनुसारको हैसियतमा पुगे पछि सरोज लागे कराते तीरै । हाल उनी कुमुतेको अझ अब्बल रेफ्रि हुन् । अमेरिकामा ए क्लासको रेफ्रिको रुपमा छन् ।
सन् २०१६ मा नेपाल आउदा ४ सय जना नेपालीलाई रेफ्रि प्रशिक्षण दिएका थिए । विगतमा भन्दा फरक थियो । कुनै समय सितेरियो केन्द्रित नेपाली करातेमा अहिले अन्य तीनवटै स्टाइलको पनि महत्वपूर्ण हैसियत छ । दोश्रो राष्ट्रिय रेफ्रि सेमिनार देखिकै उनको यो अभियान पोखरा सेमिनारसम्ममा मुर्त रुप पाइसकेको थियो । पोखरामा रहेका ४ सय जनामा पनि सबै स्टाइलका करातेकर्मी थिए । जिवनमा धेरै पदक र सम्मान पाए पनि उनकै लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मान भनेको पोखरामा नेपाल कराते महसंघले दिएको सम्मान नै हो । अबको नेपाली करातेमा उनको प्रमुख चाहना भनेको करातेको एकता । (तस्बिर ः सरोजको फेसबुटबाट साभार)